किन बिलाए पुर्खा साहित्यिक पत्रिका ?
नेपालदृष्टि । वर्तमान समाजका कुरुढीहरुको व्याख्या गर्नु मात्र हाम्रो काम होइन, संसारको नवनिर्माणका निम्ति सबै किसिमका समानता र मानव भातृत्वको नयाँ आदर्शतिर जनतालाई डोर्‍याउनु पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य ठानेका छौँ ।’
००८ मा प्रकाशित पहिलो अंकमा साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनको उद्देश्य स्पष्ट पार्दै यस्तो सम्पादकीय लेखिएको थियो सेवा मासिकमा । तर पत्रिका लामो समय टिकेन । त्यसको नौ वर्षपछि ०१६ मा प्रकाशकरसम्पादक श्यामप्रसाद शर्माले साहित्य नाम राखेर दुईमहिने पत्रिका सुरु गरे । पत्रिकाको सम्पादकीयमा शर्मा लेख्छन्– ‘हामी यस्तो पत्रिका निकाल्न चाहन्छौँ, जसमा कथा र कविताजस्ता चोखा साहित्य मात्र नरहेर तिनका साथै समस्यामूलक र समालोचनात्मक सामयिक लेखहरु पनि उचित अनुपातमा रहने गरुन् ।’
प्रगतिवादी साहित्यिक पत्रिकाहरु आन्दोलनको उद्देश्यअनुसार प्रकाशन हुन्थे । जनताको पक्षमा लेखिने प्रगतिशील साहित्य तथा कलालाई सुदृढ बनाउन स्रष्टाहरु यी साहित्यिक पत्रिकामा कलम चलाउँथे ।
थुप्रै नामी लेखक, कविको सुरुआती लेखन यिनै साहित्यिक पत्रिकाबाट भएका थिए । पारिजात, मञ्जुल, खगेन्द्र संग्रौला, रघु पन्त, मोहन दुवाल, जागृतप्रसाद भेटवाल, मोदनाथ प्रश्रित, आनन्ददेव भट्ट, चैतन्य, पूर्णप्रकाश नेपाल, श्यामप्रसाद शर्मा, घनश्याम पौडेल, गोविन्द वर्तमान, खुसीराम पाख्रिन, हृदयचन्द्रसिंह प्रधान, कृष्णप्रसाद पराजुली, तारानाथ शर्मा, बालकृष्ण पोखरेल, हरिहर खनाल, रमेश विकल, हरिगोविन्द लुइँटेल आदि । साहित्यिक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा आउने नाम अझै थुप्रै छन् । कतिपय लेखक छद्म नाममा लेख्थे, कति बेनाम थिए ।
हाँडिघोप्टेको जीतबाजी खगेन्द्र संग्रौलाको चर्चित कथासंग्रह हो । यस पुस्तकको मुख्य कथा हाँडिघोप्टे युगविजय साहित्य संगालोमा ०४० मा प्रकाशित भएको थियो । संग्रौलाकै खरानीमुनिको आगो नाटक ०३० मा संकल्प मासिकमा, हावाको पर्खाल कविता प्रभात ९०२६० मा प्रकाशित भएका थिए । युग विजयका सम्पादक चिरञ्जीवीराज शर्मा, संकल्पकी सम्पादक कुन्ता शर्मा र प्रभातका सम्पादक मनमोहन श्रेष्ठ थिए ।
०२६ मा सुरु भएको सुस्केरा द्वैमासिकका सम्पादक थिए, रामचन्द्र भट्टराई । योगेन्द्रकुमार गर्गको प्रधान सम्पादकत्वमा ०२८ मा युगबोध साहित्यिक संगालो प्रकाशन शुभारम्भ भएको थियो । यो सिरहा जिल्लाबाट प्रकाशित पहिलो साहित्यिक संकलन थियो । चितवनबाट ०२४ मा प्रकाशित दोभानले जिल्लामा साहित्यिक पत्रिकाको सुरुआत गर्ने श्रेय पाउँछ । त्यसपछि प्रकाशित नौलो राँको, जाँगर ९०३६०, जनसाहित्य ९०४८० आदि साहित्यिक पत्रिकाले चितवनका साहित्यकारको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्‍यो । ०३० मा वेदना परिवार धुलिखेलले वेदना साहित्यिक त्रैमासिक प्रकाशन सुरु गर्‍यो । सम्पादक थिए, दिल ‘वरदान’ र सुवास श्रेष्ठ ।
०३४–३५ मा सुरु भएका उत्साह, झिसमिसे, कटिबद्ध, दियो, नवआलोक, अनुभूतिलगायतका साहित्यिक पत्रिका निकै रुचाइए । झिसमिसेका संस्थापक सम्पादक र प्रकाशक थिए, रघु पन्त । ०४६ सम्म निरन्तर प्रकाशित झिसमिसे ०४६ को जनआन्दोलनका कारण दस वर्ष बन्द भयो । रोकिएको एक दशकपछि ०५७ मा पुनस् प्रकाशन सुरु भएको उक्त पत्रिका अहिले पूर्ण रुपमा बन्द छ । झिसमिसेकै समकालीन उत्साहले आफ्नो तेत्तीसौँ अंकको सम्पादकमण्डलमा पारिजात, खगेन्द्र संग्रौला, रमेश विकल, मोहन दुवाल, आनन्ददेव भट्टलाई समावेश गरेको थियो । यो पत्रिका पनि अहिले अस्तित्वमा छैन । वर्तमान समयमा नाम चलेका वरिष्ठ साहित्यकार कुनै न कुनै रुपमा विभिन्न साहित्यिक पत्रपत्रिकासँग जोडिएका थिए भन्न यी उदाहरण काफी छन् । -नेपाल साप्ताहिक
कसको कति गोल ? रोनाल्डो र लुकाकु गोल्डेन बुटका दाबेदार
लक डाउनलाई सकारात्मकरुपमा लियौ,बचेको समय सदुपयोग गरौं
पशुपतिमा साउने सोमबारको झलक (फोटा फिचर)
आजका मुख्य,मुख्य समाचारहरु ओली एक्लौटी अघि बढ्दा प्रचण्ड रुष्ट
लकडाउनमा दाङ जाने १५ जनाको समूहको कथा (फोटो फिचर)